Halyeyga Brazil ee Ronaldo Nazario oo ballan qaad lama filaan ah u sameeyay Alexis Sanchez – Gool FM
Halyeyga Brazil ee Ronaldo Nazario oo ballan qaad lama filaan ah u sameeyay Alexis Sanchez
(Milan) 21 Juun 2020. Halyeyga xulka qaranka Brazil ee Ronaldo Nazario ayaa xiddiga Inter Milan ee Alexis Sanchez oo ay milkiyaddiisa iska leedahay Manchester United u soo jeediyay inuu ku soo laabto kubadda cagta dalka Spain kuna soo biiro kooxda Real Valladolid.
Weeraryahanka reer Chile ayaa xilli ciyaareed amaah ah ku qaadanaya kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A, iyadoo la rajeynayo inuu xagaagan si toos ah kaga tago Manchester United oo diyaar u ah inay iska iibiso kaddib bandhig liita oo uu ka sameeyay Old Trafford.
Sanchez ayaa hadda caafimaad taam ah kaddib muddo saddex bilood ah oo uu la xanuunsanayay dhaawac dhanka anqowga ah, waxaana uu diyaar u yahay inuu kooxda Macallin Antonio Conte u ciyaaro kulanka ay caawa soo dhoweynayaan kooxda Sampdoria dib usoo laabashada horyaalka dalka Talyaaniga.
Laacibkan ayaa la rajeynayaa inuu si toos ah ugu biiro Inter, balse haddii kooxda Talyaaniga ka dhisan ay iska diiddo inay iibsato, waxaa albaabada u furay Ronaldo oo u soo bandhigay Sanchez inuu ku biiro naadiga La Liga ka ciyaarta ee Valladolid.
“Alexis Sanchez waxa uu ku guuleystay meel walba oo uu tagay,” ayuu yiri halyeyga Brazil isagoo ku hadlayay wicitaan dhanka aaladda loo yaqaano Zoom-ka ah.
“Waxa uu leeyahay tayo badan. Haddii uu ku guuleysan waayo Inter, kaddib Valladolid ayaa albaabada u fureysa.” ayuu yiri weeraryahankii hore ee Real Madrid.
Ronaldo ayaa Nerazzuri u soo dhaliyay 59 gool kaddib 98 kulan oo u ciyaaray, waxaana uu la wareegay wadaagga xukunka kooxda reer Spain 51% bishii Sebteembar ee sanadkii 2018, waxaase hadda lagu soo warramayaa inuu leeyahay 80% milkiyadda Real Valladolid.
Tan iyo markii naadiga ka dhisan magaalada Valladolid ay hoos tagtay xukunka milkiyadda cusub, waxay xilli ciyaareedkeedii u horreysay ay ku dhammeysatay booska 16-aad ee horyaalka Spain, halka fasal ciyaareedkan ay fadhiso kaalinta 15-aad ee kala sarreynta La Liga inkastoo ay u harsan tahay siddeed kulan.
Macallin Frank Lampard oo u hanjabay Manchester City iyo Liverpool... (Muxuu sameyn doonaa?)
Shaxda rasmiga ah kulanka maanta ee Kooxaha Aston Villa iyo Chelsea oo la shaaciyey... (Yaa ugu soo bilowday Blues?)